Boosaaso: Maxkamadda ciidamada oo askar ku xukuntay dil iyo xarig – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Boosaaso: Maxkamadda ciidamada oo askar ku xukuntay dil iyo xarig
Boosaaso – Mareeg.com: Maxkamadda Ciidammada qalabka sida ee Puntland ayaa Xukun dil iyo xarig isugu jira ku xukuntay eedeysanayaal ka tirsanaa Ciidammada Puntland kuwaas oo lagu eedeeyay inay dil iyo dhac u gaysteen dad rayid ah.
Raga maxkamadda lasoo taagay ayaa lagu kala magacaabaa Abshir Axmad Yaasiin, Maxamad Muuse Faarax, Sharmaarke Cali Xorxor iyo Cabdixakiin Salaad yaasiin. Xeer Illaaliyaha maxkmadda ciidammada qalabka sida ee Puntland ayaa Maxamed Muuse Faarax ku eedeysay inuu magaalada Bosaso 22-1-2013 ku dilay marxuum Cabdirashiid Muuse Maxamad.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Gobaladda Bari iyo Sanaag Cabdifitaax Xaaji Aadan ayaa dil toogasho ku xukumay Sharmaarke Cali Xorxore iyo Maxamad Muuse Faarax ka dib markii war bixin faah faahsan uu soo gudbiyay xeer ilaalinta maxkamadda.
Maxkamaddu waxay 10 sano oo xarig ah ku riday Maxamad Muuse Faarax oo lagu soo eedeeyay inuu dhac ka gaystay magalada Bosaso halka Cabdixakiim Salaad Yaasiin la sheegay in wax danbi ah lagu waayay sidaasi darteedna ay maxkamaddu ay xoriyadiisii siisay.
Maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa horay inta badan u xukumi jirtay dad lagu eedeyey iney ka tirsan yihiin Alshabaab, hase ahaatee xukunkaan ayaa ku dhacay askar ka tirsan ciidamada maamulkaas.